Namuhla, sibheka ngokucophelela ummeleli omuhle kakhulu wezihlahla ezivuthiwe - umsedari waseLebanese. Sifunda ngalokho okumele kubonakale khona lo mmeleli we-flora, futhi nokuthi ungatholaphi, futhi mayelana nencazelo nesicelo somuntu. Ngaphezu kwalokho, sizophendula umbuzo wokuthi kungenzeka yini ukuba sikhule lesi sihlahla ekhaya.
Isihlahla somsedari waseLebhanoni: incazelo
NgeLatin, lesi sitshalo se-coniferous sabizwa ngokuthi uCedrus libani. Umsedari waseLebhanoni ungumuthi wezihlahla ze- coniferous zomndeni wezihlahla zikaphayini. Ngaphansi kwezimo ezinhle, likhula ngamamitha amane noma amahlanu ekuphakameni. Ngakho ububanzi bomuthi bufinyelela kumamitha amabili nengxenye. Emasedari amancane aseLebhanoni, umqhele uhlolisisa, futhi uma uneminyaka yobudala uthola isimo esikhulu nesibonakaliso. Umbala wezinaliti uhluka kusuka eluhlaza kuya ku-gray-blue-green.
Izithelo lezi zihlahla kabili ngonyaka, kusukela eminyakeni engu-25-30 ubudala. Umsedari waseLebhanoni unezinhlobo ezibomvu ezibomvu zemijondolo, ubude obungafinyelela ngamasentimitha angu-12, nobubanzi - amasentimitha angu-4-6. Imbewu ayinakulinganiswa, ihlambulukile futhi isakazwa ngumoya. Ubude bawo buyizigidi eziyi-15-18, ububanzi - 5-7 amamitha, kanti iphiko lifinyelela kumamitha angu-25. Amagxolo emsedari yaseLebhanoni i-gray gray ne-scaly. Izinkuni zinombala obomvu futhi zihlukile ngamandla ayo, iphunga elimnandi, ukukhanya nokunciphisa.
Umsedari waseLebanoni ukhula kancane. Iyakwazi ukudlulisa amazinga okushisa aphansi kuze kube ngaphansi kwe-degrees Celsius engama-30. Lezi zihlahla zithandana, ziphikisana nesomiso futhi zihlaselwa emhlabathini. Kodwa-ke, ababekezelelisi hydration ngokweqile.
Njengoba igama libonisa, izihlahla zalezi zinhlobo zikhula eLebhanon. Njengomthetho, zitholakala ezindaweni ezinzima ukufinyelela ezindaweni ezinamaphesenti angama-2 kuya kwamamitha ayizinkulungwane ezimbili ngaphezu kolwandle. Ngeshwa, ngenxa yokusika okwesikhashana okungaqondwanga komsedari waseLebanoni, futhi ngenxa yokulimala okukhulu kwezinto eziphilayo ezindaweni zokukhula kwemvelo, kwaqothulwa ngokuphelele. Ngokuba namuhla ezweni lakuleli sitshalo esihle kakhulu se- coniferous kukhona amathanga amancane emisedari ayisithupha kuphela.
Ngaphandle kwezwe lomdabu lomuthi, namuhla ungathola umsedari waseLebania eCrimea, ogwini lwaseCaucasus, naseTranscaucas nase-Asia Ephakathi.
Imininingwane eyengeziwe mayelana nomsedari waseLebanese
Ngendlela, lesi sihlahla singumfanekiso omkhulu kazwelonke waseLebanon. Isithombe sakhe singabonakala efulethini, ingubo yezikhali kanye nemali yezwe. Umklomelo omkhulu kazwelonke weLebhanoni yi-National Order of Cedar. Futhi kuleli lizwe yi-Divine Cedar Forest, ehlanganisiwe ohlwini lwezamagugu e-UNESCO futhi ngaphansi kokuvikelwa kwalenhlangano. Lapha zikhula izihlahla, iminyaka eyizinkulungwane ezimbili.
Isicelo nesilinganiso salesi sihlahla se-coniferous
Kusukela ezikhathini zasendulo, umsedari waseLebanoni usetshenziselwe ekwakhiweni nasekwakhiweni kwemikhumbi. Kukholelwa ukuthi izinambuzane zayo azikhathaleli kakhulu izinambuzane ezihlukahlukene zezidakamizwa. Ukukhulunywa kokuqala kokusetshenziswa komsedari waseLebanoni kuvela eGibhithe lasendulo. Kusuka enkuni yayo, i-sarcophagi yenzelwe lapha amafarasi afile. Futhi kusukela emsedari kwakwenziwa kanye nomngcwabo odumile weSolar Boat, manje osemunye wemipiramidi yaseGiza. Futhi, lezi zihlahla zazisetshenziselwa ukuhlobisa izindlu zezindlovu nokwakha izakhiwo zenkolo.
Imisedari yaseLebanoni nayo isetshenziswe naseYurophu. Ngakho-ke, i-Venice eyaziwa emhlabeni wonke-idolobha emanzini - yayakhiwe emanzini avela kulo muthi. Futhi abagibeli abadumile baseFenike balima amanzi oLwandle iMedithera emikhumbi evela emsedari waseLebanese.
Lesi sitshalo sinemithi yokwelapha. Ngakho-ke, amafutha omsedari waseLebhanoni anomphumela we-antiseptic.
Umsedari waseLebanoni ekhaya
Lesi sitshalo esihle kakhulu sakhula abalimi baseYurophu emakhulwini amaningi eminyaka. Ngakho-ke, uma ufisa, ungahlobisa indlu yakho ngemisedari yaseLebanese. Into esemqoka okumele uyikhumbule ukuthi isitha esibi kunazo zonke zalesi sitshalo somile kakhulu futhi sishisa emoyeni. Ngakho-ke, ukubeka umsedari omncane waseLebanoni kufanele ube kude namabhethri afudumele. Ngakho-ke, uma ebusika usindise isitshalo emiphumeleni emibi yokushisa, khona-ke ngoFebhuwari-Mashi izonikeza amahlumela amancane umbala ohlaza okwesibhakabhaka.
Umsedari waseLebanoni ekhaya ungabizwa ngokuthi into eyingqayizivele, okuzoyihlobisa noma yikuphi ukungaphakathi. Ungayithenga ezindaweni ezikhethekile zokuthengisa izitshalo. Ngendlela, emazweni aseningizimu inani lentengo yalo livame ukufanekisela kakhulu (lokhu, empeleni, liphathelene nezithombo ezincane, hhayi ngemithi engapheli). Ngaphandle kwalokho, kungenzeka ukuba ukhule umsedari waseLebhanoni kanye nembewu. Noma kunjalo, le nqubo isinde kakhulu, futhi akuwona wonke umuntu onokubekezela ukuqedela izinto kuze kube sekugcineni.
Izingilazi Ray-Ban Aviator - zakudala stylish